Foomka Macluumaadka Tirakoobka - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Aad bay muhiim noogu tahay inaan ilaalino feylasha tirakoobka saxda ah oo casri ah dhamaan qoysaska ku nool xuduuda degmadeena. Tan waxaa ka mid ah dadka waayeelka ah, dadka hadda u soo guuray aagga, qoysaska leh carruurta da'da dugsiga xannaanada iyo kuwa hadda dhashay, qoysaska aan carruurta lahayn, iyo kuwa carruurta leh ee guryahooda wax lagu baro ama dhigta iskuul aan dawli ahayn.
Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Aagga waxay leeyihiin fasalo waxbarasho iyo fursado loogu talagalay ardayda da 'walba leh. Macluumaadka aad bixiso waxaa loo isticmaali doonaa in lagu sameeyo saadaasha isqorista, qorshaynta barnaamijka, go'aaminta shaqaalaha iyo baahida boosaska fasalka iyo inbadan!
Waad ku mahadsantahay bixinta macluumaadkaan! Macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aad na siiso waxaa isticmaali doona oo keliya Dugsiyada Dadweynaha Stillwater ee aagga mana iibin doono lamana siin doono cid saddexaad.
Dadka Waaweyn ee Ku Nool Cinwaankan:
Qaangaarka 1 ee ku nool cinwaankan * waa loo baahan yahay
Jinsiga Dadka Waaweyn 1
Fadlan Xulo 1
Taariikhda dhalashada dadka waaweyn 1 * waa loo baahan yahay
Qaangaarka 2 ee ku nool cinwaankan
Jinsiga Dadka Waaweyn 2
Taariikhda dhalashada dadka waaweyn 2 * waa loo baahan yahay
Lambarka Taleefanka Aasaasiga ah
Ku qor dhammaan Carruurta ka yar da'da 21 ee ku nool Cinwaankan:
Immisa carruur ah oo da'doodu ka yar tahay 21 sano ayaa ku nool gurigan?
Magaca ilmaha 1 * ayaa loo baahan yahay
Jinsiga Ilmaha 1
Taariikhda dhalashada Ilmaha 1 * ayaa loo baahan yahay
Jinsiga la jecelyahay iyo ku dhawaaqida
Dugsiga Hadda dhigta:
Dugsiga barbaarintaXanaanada caruurtaFasalka 1Fasalka 2Fasalka 3Fasalka 4Fasalka 5Fasalka 6Fasalka 7Fasalka 8Fasalka 9Fasalka 10Fasalka 11Fasalka 12n / a
Magaca ilmaha 2 * ayaa loo baahan yahay
Jinsiga Ilmaha 2
Taariikhda dhalashada Ilmaha 2 * waa loo baahan yahay
Magaca ilmaha 3 * ayaa loo baahan yahay
Jinsiga Ilmaha 3
Taariikhda dhalashada Ilmaha 3 * waa loo baahan yahay
Magaca ilmaha 4 * ayaa loo baahan yahay
Jinsiga Ilmaha 4
Taariikhda dhalashada Ilmaha 4 * ayaa loo baahan yahay
Magaca ilmaha 5 * ayaa loo baahan yahay
Jinsiga Ilmaha 5
Taariikhda dhalashada Ilmaha 5 * waa loo baahan yahay
Magaca ilmaha 6 * ayaa loo baahan yahay
Jinsiga Ilmaha 6
Taariikhda dhalashada Ilmaha 6 * ayaa loo baahan yahay
Magaca ilmaha 7 * ayaa loo baahan yahay
Jinsiga Ilmaha 7
Taariikhda dhalashada Ilmaha 7 * waa loo baahan yahay
Magaca ilmaha 8 * ayaa loo baahan yahay
Jinsiga Ilmaha 8
Taariikhda dhalashada Ilmaha 8 * ayaa loo baahan yahay
Magaca 9-aad ee ilmaha * ayaa loo baahan yahay
Jinsiga Ilmaha 9
Taariikhda dhalashada Ilmaha 9 * ayaa loo baahan yahay
Magaca ilmaha 10 * ayaa loo baahan yahay
Jinsiga Ilmaha 10
Taariikhda dhalashada Ilmaha 10 * ayaa loo baahan yahay
Cinwaanka Jidka Hore ee Qoyska
Aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga!